2015: ယခုနှစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု gimmick ဖြစ်ခြင်းရပ်တန် - သတင်း Rule
2015: ယခုနှစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု gimmick ဖြစ်ခြင်းရပ်တန်
စမတ်ဖုန်းလုံခြုံရေးမရှိတော့သင့်ရဲ့ဒေတာကိုမထိခိုက်စေဘဲ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကျင့်သောထိရောက်သော biometric မှကျေးဇူးတင်စကားခံထားဖြစ်နှင့်သင်တို့၏လမ်းထဲကရရှိပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “2015: ယခုနှစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု gimmick ဖြစ်ခြင်းရပ်တန်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, တနင်္ဂနွေ 27 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ် theguardian.com များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပထမဦးဆုံးကင်မရာသောအခါကိုသတိရပါ? ငါကောင်းတဲ့ခဲ့သည်, သေချာပါ, ဒါပေမယ့်အမှိုကျဓာတ်ပုံများ ယူ. သင်မရှိသလောက်အသုံးပြု. ထိုအခါက capacitive touchscreen ကတယ်, တံသုံးပြီးထက်ပိုကောင်းခဲ့သည့်, သင်တစ်ဦးကီးဘုတ်သုံးပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရိုက်ထည့်နိုင်ဘူးလျှင်ပင်. လျင်မြန်စွာနှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်နှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်လာခဲ့သည်.
ထိုအခါလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာသည် လာ., သငျတို့သထင်: အမှန်? အဘယ်ကြောင့်? တစ်ဦး pin ကိုအတွက်ချပြီးကြောင့်နာကျင်မဟုတ်ပါဘူး, ငါတကယ်ကဒီလိုအပျလုပျ? သို့သျောလညျးယခုသင်ပင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုစဉ်းစားကြဘူး, သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောင်သို့မဟုတ်သူအပေါင်းစက္ကန့်, သင်ကလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုသုံးသောကွောငျ့. 2015 လက်ဗွေစကင်နာအသက်အရွယ်၏တို့သည် လာ. ယခုနှစ်ခဲ့သည်.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က, ရှည်လျားသော pin ကိုသို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုသုံးပြီး - - သင့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ multi-ကိုထိပုတ်ပါကိစ္စခဲ့အခါတိုင်းသင့်ရဲ့ screen ကိုမှောင်မိုက်သွားကြ၏. ဒါဟာအများအပြားရုံနှောငျ့ယှကျဘူးဒါကြောင့်ငွီးငှေ့ဖှယျခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အပေါ်ဟန်းဆက်နှင့်အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာ, တစ်ဦးဖြတ်သန်းပြစ်မှုဆိုင်ရာမှအားနည်းချက်. သို့မဟုတ်ပဲသင့်ဖုန်းမှသင့်ရဲ့မိခင်မှညစ်ပတ်ပေရေစာသားများပေးပို့ခြင်းထင်တဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှတစ်ဦး '' ဟာသ၏အာရုံ '' ပြသ.
လက်ဗွေစကင်နာများအအဆုံးမဲ့သော့ဖွင့အိပ်မက်ဆိုးကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့လာကြပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်နှင့်အတူထိုအဆင်မပြေစကားပြောဆိုချက်, လုံခြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းများစောင့်ရှောက်စဉ်. ငါတို့မူကားသူတို့ဒီတော့အသုံးဝင်သောသက်သေပြနေတာပါအံ့အားသင့်မဖြစ်သင့်.
လက်ဗွေရာတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖော်ထုတ်၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းရှိနေဆဲ, အတူ 98.6% ဟုတ်မှန်ရေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့ရော်ဂျာသှား
လက်ဗွေရာအဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြ 1858, ကန်ထရိုက်စာချုပ်များအပေါ်လက်မှတ်ပေါင်းအတည်ပြုတစ်လမ်းအဖြစ်. ထိုအချိန်မှစ. အသားအရေကုန်း၏ပုံစံများတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ရပြီ 98.6% တစ်ခုတည်းကိုလက်ညှိုးများအတွက်တိကျမှန်ကန်မှု, အမေရိကန်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများ Institute မှနှင့်နည်းပညာမှအချက်အလက်များအရသိရသည်.
စားသုံးသူလက်ဗွေစကင်နာများကနောက်ဆုံးအဘို့အလှည့်ပတ်ပြီ 10 နှစ်ပေါင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလုံခြုံရေးကိရိယာအဖြစ်ကွန်ပျူတာများမှတပ်ဆင်ထားတဲ့. သို့သော်တစ်ဦး sensor ကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်ချောင်းကိုပွတ်ဆွဲရန်အသုံးပြုသူအတင်းကြောင့်စကင်နာများအသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့လုံလောက်တဲ့တိကျမှုနှေးကှေးနှင့်မဖြစ်ဖို့သက်သေပြ 100% ပထမဦးဆုံးသွားလာရင်းအချိန်.
သူတို့က gimmicks ခဲ့ကြ. အများဆုံးအသုံးပြုသူဘဝတွေကိုမှစစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုထည့်ပါဘဲတဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာရောင်းဖို့တစ်ခုခု. အစားကလျှော့ချထက်သူတို့ကပဲဆက်ပြောသည်စိတ်ပျက်.
Apple ရဲ့ Touch ID, ထိုအောက်တွင် embedded တဲ့ Touch-based လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ 2013 iPhone 5S ကို'' ကိုယ့်အိမ်မှာခလုတ်ကို, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတစ်ဦးပိုင်ရှင်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသောနည်းပညာစတင်မိတ်ဆက်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့. ဒါဟာ pin ကိုဝင်ရောက်ထက်ပိုမြန်ခဲ့ပါတယ်နှငျ့သငျပွတ်ဆွဲရန်မလိုအပ်ခဲ့ဘူး, ပဲဒါဒုတိယအကြိမ်သို့မဟုတ်များအတွက် home ခလုတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးလက်ချောင်းနေရာ.
အဆိုပါ iPhone 5S ကိုစမတ်ဖုန်းအပေါ်ခြစ်ရာမှလက်ဗွေရာအာရုံခံဆောင်ခဲ့, အသုံးဝင်သောတစ်ခုခုသို့ gimmick မှသူတို့ကိုလှည့်. ဓါတ်ပုံ: ကို Justin Sullivan က / Getty Images
မှစ. 2013 လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာများတိုးတက်နှင့်ပိုမိုစုံလင်ကြပြီ. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှလေးနက်သောပြိုင်ဘက်ကိုမြင်လျှင် Samsung က နှင့် ဟွာဝေး. ဒီနှစ်, ကောင်းတစ်ဦးလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူစတင်နီးပါးတိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းကို, စဉ်ပင် အချို့သောနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေး နှင့်အနိမ့်တန်ဖိုးနည်းထုတ်ကုန်သူတို့နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး လာ. ,.
ဒီနေ့သူတို့ကိရိယာ၏ရှေ့ andback ပေါ်နှင့်ပင်ဘေးထွက်အပေါ်ပါဝါခလုတ်အောက်မှာပေါ်လာ Sony ရဲ့အမှု၌. သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူလက်ဗွေရာကိုအသိအမှတ်မပြု 98% တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တစ်စက္ကန့်အောကျရှိ, သောသူတို့အာဏာအပေါ်ကိုတယောက်ထိတွေ့နှင့်အတူသော့ဖွင့်. အဘယ်သူမျှမ gimmicks, ချောမွေ့စွာခေတ်သစ်စမတ်ဖုန်းအတှေ့အကွုံသို့ပေါင်းစည်းလုံခြုံရေး့အပိုင်းအစ.
Apple ကရည်မှန်းချက်ရေးသားချက်များသတ်မှတ်ထား, ဒါပေမယ့် Android သုံးစွဲသူများ၏အများစုမှာဒီလွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုအဆင့်မြှင့်များအတွက်ကျေးဇူးတင်နှစ်ခုလူသိနည်းသောကုမ္ပဏီများရှိ: ဆှီဒငျကုမ္ပဏီတွေလက်ဗွေ Card များကို AB နှင့် Precise biometric, သောတဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အခြားဆော့ဖ်ဝဲကို.
Android နဲ့ iOS ကို၏အမှု၌, လက်ဗွေပြည်တွင်းဖြစ်သိမ်းဆည်းထားနှင့်တစ်ဦးဆာဗာကိုငါလွှတ်လိုက်ကြသည်မဟုတ် – အဖြစ်အရေးပါသောလုံခြုံရေးခြေလှမ်း, စကားဝှက်သို့အသုံးပြုသူအမည်နှင့်မတူဘဲ, ဒါကြောင့်အခိုးခံရလျှင်သင်သည်သင်၏လက်ဗွေရာကိုမပြောင်းနိုင်.
Apple ကရှေ့အပေါ်တစ်ဦးလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့တစ်ဦးတည်းသာမက. HTC ရဲ့ One ကို A9 တစ် lozenge တူ shaped တယောက်ရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတာနဲ့, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့နောက်ကျောတစ် pin ကိုအတွက်ကိုအသာပုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပုံစံပွတ်ဆွဲရန်ရှိခြင်းသှားဖို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ပါတယ်. ထို့စတင်ဖြစ်ပါသည်. လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူအများစုဟာစမတ်ဖုန်းလည်းသုံးစွဲသူများက၎င်းတို့၏ဂဏန်းတွေနဲ့ဖုန်းရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်း secure ခွင့်ပြု, ထိထိရောက်ရောက်ရှည်လျားသောသတိရသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေ၏ပြဿနာကိုလျှော့ချ, app ကိုဝယ်ယူရာတွင်အဘို့အလုံခြုံမှုရှိတဲ့စကားဝှက်, ဥပမာအားဖြင့်.
သင်၌စမတ်ဖုန်းစတင်နေတယ်ဆိုရင် 2016 တစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာမပါဘဲ, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာလည်း selfie ကင်မရာနှင့်အထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထွက်ထွက်ခွာစေခြင်းငှါ.
လက်ဗွေစကင်နာများအတွက်လက်ငင်းလာမည့်ခြေလှမ်း On-screen ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်. အဘယ်သူမျှမ button ကို, အဘယ်သူမျှမအာရုံခံကိရိယာ, ကထိသူအသိအမှတျပွုကွောငျးကိုဖွင့်မယ့် touchscreen က. သိပ္ပံ-စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်အနှစ်ကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပြီ, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ရုပ်ကြွင်းမြင်စေပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိ.
ထိုအလက်ဗွေရာနည်းပညာကိုသို့ကတိထားရာ biometric တစ်ဟုန်ထိုး့စတင်များမှာ. Iris ကစကင်နာ, လက်သွေးကြောစကင်နာ, နှလုံးစည်းချက်စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောအခြားအတော်လေးထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်ကနောက်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုပြိုင်ဘက်များမှာ.
HTC One ကို A9 ပြန်လည်သုံးသပ်: သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်မဟုတ်အိုင်ဖုန်းစိန်ခေါ်
OnePlus2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: တကယ့် '' စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လူသတ်သမား ''?
← သင့်ရဲ့အိမ်သာစက္ကူသင့်အကြောင်းမိန့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုပါဝါသော့ဖွင့် →